Ireo mpivarotra B2B dia mahita fahombiazana amin'ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Ireo mpivarotra B2B dia mahita fahombiazana amin'ny marketing amin'ny atiny
Alarobia, Novambra 6, 2013 Kelsey Cox
Isan-taona, ny habetsaky ny vola ampidirina content marketing toa mitombo ny paikady. Manokana, ny mpivarotra atiny B2B dia mikatsaka ny hanana fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ny fitarihana taranaka, ny fahazoana ny mpanjifa sy ny tsy fivadihana, ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ary ny varotra amin'ny alàlan'ny famoronana atiny. Rehefa matsilo kokoa ny mpivarotra amin'ny paikady ampiasainy hizarana ny atiny, izay tetika sy sehatra ary fironana iza no mahazo tombony lehibe indrindra? LinkedIn miara-miasa amin'ny MarketingProfs ary ny Content Marketing Institute hamaly ity fanontaniana ity ary hanimba ny tontolon'ny ankehitriny.
Mampiseho ny angon-drakitra fa 73% ny mpivarotra no mamorona atiny bebe kokoa noho izay nataony tamin'ny taon-dasa ary ny mpivarotra mahomby indrindra dia mampiroborobo ny atiny ao amin'ny sehatra media sosialy 7, mifanohitra amin'ny 4 ampiasain'ny ekipa tsy dia mahomby loatra. Ny infografika dia manaporofo ny iray amin'ireo paikady mahomby indrindra, mitombo ny lazan'ny 51% amin'ireo mpivarotra B2B amin'ity taona ity, tafakatra 13% tamin'ny taona teo aloha. 91% amin'ireo mpivarotra B2B no maniry ny hampiroborobo ny atiny ao amin'ny LinkedIn, arahin'ny Twitter amin'ny 85%. Jereo hoe tetika marketing amin'ny atiny inona no ampiasain'ny mpivarotra B2B ary inoany fa mahomby indrindra ao amin'ny Sary torohay eto ambany.
Tags: marketing amin'ny atiny b2bangona b2binfografika b2bContent MarketingSary torohay-barotra
Telozotra momba ny fampandrosoana Web
14 Nov 2013 amin'ny 9:48 maraina
Kelsey, data be eto !! Fampahalalana tena be fampahalalana hanampiana ireo mpivarotra hafa hahita izay ataon'ny mpivarotra an-tampon'ny kilasy amin'ny fomba mahomby !!
14 Nov 2013 tamin'ny 8:36 PM
Misaotra indrindra! Faly ianao fa nankafy ny lahatsoratra sy ny sary.